अमेरिकी चेतावनीपछि पुटिनले गरेको यस्तो घोषणाले विश्वभर उथलपुथल — Imandarmedia.com
अमेरिकी चेतावनीपछि पुटिनले गरेको यस्तो घोषणाले विश्वभर उथलपुथल
एजेन्सी। रुसले विश्वको मै हुँ’ भन्ने ’सुपरपावर’लाई ठेगान लगाउने सामर्थ्य आफूसँग भएको चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाप्रति लक्षित गर्दै रुसले पश्चिमा जगतले रुसलाई तहसनहस बनाउन डरलाग्दो किसिमले घृणा फैलाउने काम गरिरहेको तर यसले केही फरक नपर्ने बताएको छ।
सन् २००८ देखि २०१२ सम्म रुसको राष्ट्रपति रहेका तथा हाल रुसको सुरक्षा परिषद्को उपसचिव दिमित्री मेदभेदेभले भनेका छन्, “अमेरिकाले रुसलाई घुँडा टिकाउने प्रयास स्वरूप रुस विरोधी भावना फैलाउने घृणित काम गरिरहेको छ। यसले केही गर्न सक्तैन ।
रुससँग सम्पूर्ण शत्रुलाई आ–आफनो ठाउँमा राख्ने शक्ति छ। २४ फ्रेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता अमेरिका, युरोपेली संघ र अमेरिकाको एसियाली गठबन्धनले रुसी नेता, कम्पनी र व्यापारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट अलग्याएका छन् ।
रुसले अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिम जगतले आफूमाथि लगाइएका भ्रष्ट र बेइमान प्रतिबन्धका बाबजुद राम्रो गर्ने सक्ने बताएको छ । साथै रुसले सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि आफूले पश्चिमा जगतसँग गरेको सम्बन्ध विस्तार अब समाप्त भएको र अब आफूले अन्य शक्तिहरूजस्तै चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्ने जनाएको छ।
विगत केही सातामा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिए जसको प्रभाव युक्रेन र रुसमा मात्र नभई समस्त विश्वमा नै पर्न सक्छ। यी निर्णयहरू लिनुपूर्व उनले कोसँग परामर्श गरे? के केही विश्लेषकहरूले भने जस्तै मस्कोले देखाएको सैन्यवाद र आक्रामक बोली “सिलोभिकी“ भनिने मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको शक्तिशाली प्रभावको नतिजा हो त?
रुसमा धेरै सुरक्षा र कानुन बनाउने निकायहरू छन् जसलाई “सिलोभिकी“ (रुसी भाषामा ’सिला’को अर्थ बल हुन्छ) भनिन्छ। भ्लादिमिर पुटिन आफैँले तीमध्येको ’केजीबी’ भनिने गुप्तचर निकायबाट आफ्नो पेसागत यात्रा सुरु गरेका थिए। केजीबी सोभियत पतनपछि रुसी सङ्घीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) बन्यो। पुटिन सत्तामा आएदेखि “सिलोभिकी“ को प्रभाव बढ्दै गएको छ।
रुसको अधिकांश आन्तरिक तथा परराष्ट्रनीतिका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रायः सुरक्षा परिषद्को बैठकमा हुने गर्छ। उक्त परिषद्मा शीर्ष “सिलोभिकी“ छन् जसअन्तर्गत एफएसबी र परराष्ट्र गुप्तचर निकायका प्रमुखहरू, आन्तरिक, परराष्ट्र तथा रक्षामन्त्रीहरू, साथै प्रधानमन्त्री र संसद्का दुवै सदनका सभामुख पर्छन्। रुसी सुरक्षा परिषद्मा कुल ३० सदस्य छन्।
’केजीबी’को उत्तराधिकारीको रूपमा आएको अर्को निकाय ’एफएसबी’को प्रमुखको रूपमा पुटिनको स्थानमा सन् १९९९ मा पात्रुशेभ आएका थिए। उनी सन् २००८ सम्म यो पदमा रहे। उनी पुटिनको सबैभन्दा निकटस्थमध्ये एक हुन् र सायद पुटिनमा सर्वाधिक प्रभाव जमाउन सक्ने बोली उनकै मानिन्छ।
तर सबैभन्दा नजिकको विश्वासपात्र र सल्लाहकार वास्तवमा रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगु हुन् जसले रुसी सैन्य गुप्तचर निकाय ’जीआरयू’ समेत हेर्छन्।जीआरयूका चरहरूलाई सन् २०१८ मा ब्रिटेनमा भूतपूर्व रुसी एजेन्ट सेर्गेई स्क्राइपाल र सन् २०२० मा साइबेरियामा विपक्षी राजनीतिज्ञ एलेक्सी नाभाल्नीलाई विष दिएको आरोप लागेको थियो।
स्रोतका अनुसार सन् १९९० को दशकमा पुटिन र शोइगुबीचको सम्बन्ध चिसो थियो। तर २००० को दशकमा उनीहरूको फेरि कुरा मिल्यो र अन्ततः घनिष्ठता बढ्यो। उनीहरू नियमित रूपमा साइबेरियामा सँगै छुट्टी मनाउन जान्छन् जुन शोइगुको गृहनगर हो। एफएसबी प्रमुख अलेक्जान्डर बोर्तनिकोभले लेनिनग्रादस्थित केजीबीमा भ्लादिमिर पुटिनसँगै सेवा गरे।
बोर्तनिकोभ र पात्रुशेभजस्तै, विदेशी गुप्तचर प्रमुख सर्गेई नारीस्किनले लेनिनग्रादमा भ्लादिमिर पुटिनसँगै सेवा गरे। गुप्तचर प्रमुख भए पनि उनी तुलनात्मक रूपमा एक सार्वजनिक अधिकारी हुन् जसले बीबीसीका स्टीभ रोजेनबर्गलगायत धेरै सञ्चारकर्मीलाई अन्तर्वार्ता दिएका छन्। नारीस्किनलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नेहरू उनलाई पुटिनप्रति समर्पित र स्वभावगत तवरले आदेशहरूको अक्षरशः पालना गर्ने अधिकारीको रूपमा लिन्छन्।